Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » Umdyarho woTsalo lweHlabathi: Umdyarho weTorrence ujoyina iToyota yeQela
Umdyarho weTorrence uza kujoyina iQela laseToyota ukuqala nge-2022 ye-NHRA yeNkampu yeHlabathi yoMdyarho woRhuqo lweHlabathi. Ukongezwa kweenzame zamaqela amabini eTorrence kukhulisa intsebenziswano yeqela leToyota ukubandakanya iidragsters eziPhezulu zePetroli kunye neeMoto ezimbini ezihlekisayo.
"UTorrence Racing uyinkokheli kukhuphiswano lwe-NHRA, kwaye sijonge phambili ukuzisa uSteve noBilly kusapho lakwaToyota ngo-2022," utshilo uPaul Doleshal, umphathi weqela, iiMotorsports kunye neeAsethi, iToyota Motor North America (TMNA). “Sinabaqhubi abangakholelekiyo kunye namaqabane eqela kwimbonakalo ye-NHRA. Ukongezwa kukaSteve noBilly Torrence kuyakuqinisa kuphela olo luhlu lubalaseleyo. ”
Umdyarho weTorrence ubusoloko ungamandla kwi-NHRA kule minyaka idlulileyo. USteve uqhubele phambili kuma-49 ophumeleleyo kwiminyhadala yamakhondo angama-263 nakwiintshatsheli ezintathu ze-Fuel ephezulu. Kule sizini, uSteve uphumelele amatyeli alithoba kwaye uyinkokeli yamanqaku ngoku. Utata wakhe, uBilly, uphumelele kabini kulo nyaka kunye namaxesha asibhozo kwikhondo lakhe lomsebenzi. Ngaphandle kokuqhuba ishedyuli yexeshana, uBilly okwangoku ukwindawo yesihlanu kumanqaku onke.
IToyota ibonelela amaqela ayo e-NHRA ngezithuthi ezirhuqwayo, kunye nobunjineli, itekhnoloji kunye nenkxaso ye-trackside nge-TRD (iToyota racing Development). Ukongeza kuMdyarho weTorrence, iToyota izakuqhubeka nokuxhasa iqela elisandula ukusekwa lika-Antron Brown- iAB Motorsports, iDC Motorsports kunye neenzame zamaqela amathathu eKalitta Motorsports ngo-2022.
“Ndisikelelekile ngokuba nempumelelo enkulu kwinkqubela phambili yam ye-NHRA, kodwa ndiziva ngathi olu bambiswano lutsha neToyota neTRD luza kuphucula kuphela into enokwenziwa yiTorrence Racing kulo mzila,” utshilo uSteve Torrence. “Ndizibonele ngokwam ukuba abaqhubi kunye namaqela anxulumene neToyota akayonxalenye nje yoluhlu lwabo, kodwa bayinxalenye yosapho. Ngumvelisi okhethekileyo obeka abantu phambili, kwaye olo luhlobo lwentsebenziswano iqela lethu lonwabile ukuba yinxalenye yokuqala isizini ezayo. ”
USteve noBilly Torrence bajoyina ulungelelwaniso lomqhubi weToyota obandakanya amaxesha amathathu i-NHRA yintshatsheli ye-Fuel ephezulu, u-US Nationals ophumeleleyo u-Alexis DeJoria, ophumelele ugqatso lwamaxesha angama-49 uDoug Kalitta, intshatsheli ye-Fuel ephezulu u-Shawn Langdon kunye neentshatsheli ze-Car Funny ngo-2013 u-JR Todd.
Itoyota ibhiyozela ixesha layo lama-20 kwi-NHRA kulo nyaka. Abaqhubi beToyota baphumelele i-137 ye-Fuel ephezulu kunye nemidyarho engama-43 yeeMoto ezihlekisayo kunye neTop Fuel ezintandathu kunye nobuntshatsheli beMoto eziMnandi ezintathu ngexesha lazo kuthotho.